Amụma na Apple ga-nzọ na USB-C na ọgbọ na-abịa iPhone | Akụkọ akụrụngwa
Amụma, Apple ga-nzọ na USB-C na ọgbọ na-abịa iPhone
Ọtụtụ bụ asịrị na-agwa anyị banyere ozi ọma na ọgbọ na-abịa abịa nke ma iPhone na iPad nwere ike mejuputa. Dị ka ndị dị otú a, ọ kachasị mma ile ha dị ka nke ahụ, asịrị na-emecha nwere ike ọ gaghị abụ eziokwu ọ bụ ezie na, ọ dịkwa nnọọ eziokwu na, n’oge ụfọdụ, ha nwere ike inwe ọtụtụ ntọala ma nwekwaa ntụkwasị obi ma ọ bụrụ na anyị eburu n’uche ebe asịrị a niile si.
Oge a ka anyị ga-ekwu maka ihe dị mfe dịka ngbanwe na ọgbọ na-esote nke iPhone na iPad nke ihe ọ bụla na-erughị njikọ Lightning, ụdị njikọ nke Apple na - eji taa, na, mgbe ọtụtụ ọgbọ gasịkwara anyị, ọ ga-eji ihe nhichapụ USB-C dochie ya, mgbanwe ga-eme ka njedebe nke apụl bitten dakọtara nke ukwuu, si otú a na-erite uru, karịa ihe niile, onye ahịa.
1 Apple nwere ike mechaa kpochapụ njikọ Lightning site na ịkụ nzọ na USB-C
2 Nginggbanwe njikọ njikọ Lightning maka USB Type C na-egosi nnukwu mgbanwe na ọkwa ngwaike
3 IPhone na iPad nke ejiri njikọ USB-C agaghị eru ahịa, ọbụlagodi, ruo 2019
Apple nwere ike mechaa kpochapụ njikọ Lightning site na ịkụ nzọ na USB-C
Dị ka ihe ncheta, gwa gị na njikọ a nke Apple mepụtara maka ngwaahịa ya Ọchịchị kụrụ ahịa n'akụkụ iPhone 5. N'etiti ihe ndị kachasị adọrọ mmasị nke ụdị njikọ a na-enye, ịgwa gị na, otu n'ime ihe kachasị mkpa, anyị chọtara ya karịa ihe niile na ntụgharị mbufe na ọ nwere ike iru na uru nke ịbụ 80% pere mpe karịa onye bu ya ụzọ.
Isi ihe ọzọ nke kwadoro ụdị njikọ a, anyị na-ekwu maka Lightning, bụ na ọ bụ n'ụzọ nkịtị yiri na n'akụkụ abụọ nke n'ikpeazụ sụgharịrị gaa na ikpo okwu a na-agbanwe kpamkpam. Ekele maka ogo a na karịa ihe niile iji jiri ya mee ihe n'ikpeazụ nye ndị ọrụ, ndị nrụpụta Apple na ndị injinia kpebiri na, ebe ọ bụ na iPhone 7 bịara n'ahịa ahụ, ọbụnadị ekweisi ga-amalite iji ụdị njikọ a.
Nginggbanwe njikọ njikọ Lightning maka USB Type C na-egosi nnukwu mgbanwe na ọkwa ngwaike
Obi abụọ adịghị ya, ịkwaga site na njikọ dịka Lightning na USB-C bụ ihe pụrụ iche nye Apple. N'oge a anyị ga-eburu n'uche na Apple ka a mara mgbe nile maka iji ya njikọta na ya niile smartphones na mbadamba. Otu n'ime ihe edeturu na-atụ aka na mgbanwe a, dịka egosiri na mgbasa ozi dị iche iche, nwere ike ịbụ nkuchi na MacBook nke njikọ USB-C, nke ga-emesị rute iPhone na iPad nke ga-akụ ahịa ahụ n'afọ ọzọ.
Dị ka ọ na-adịkarị na ụdị mmegharị a na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ niile, iji USB-C na-akwado Lightning Ọ nwere ọtụtụ elele kamakwa ụfọdụ ọghọm ndị ọzọ dị ka ọ pụrụ ịbụ naanị eziokwu na aga ngwa ma ọ bụ ozugbo chaja ga-aba dakọtara otú, ọzọ, niile ọrụ ga-amalite na-agbanwe.
Banyere uru nke mgbanwe a na ndị njikọ ahụ, ekwesịrị ịdeba ama, na USB-C na-enye bandwidth dị elu nke ukwuu ma e jiri ya tụnyere Lightning yana eziokwu dị mfe, na-adọrọ mmasị maka ndị ọrụ niile n'echiche m, na Apple ga-emecha kwe ka ụfọdụ dakọtara n’etiti ekwentị mkpanaaka ha na ndị dịlarị adị n’ahịa.
IPhone na iPad nke ejiri njikọ USB-C agaghị eru ahịa, ọbụlagodi, ruo 2019
Mgbe anyị matachara nke a, anyị abịarute ajụjụ achọrọ ... Kedu mgbe ọdụ Apple mbụ na mbadamba ga-eji ụdị njikọ ọhụrụ a ruo ahịa? N'oge a na dịka ụfọdụ isi mmalite anyị si ekwu maka nrụzigharị ngwaike zuru ezu ka iPhone ma ọ bụ iPad nke a ga-ebido n'otu afọ a 2018 ga-aga n'ihu na-enwe njikọ Lightning n'ihi obere oge fọdụrụ maka mbido ya. Nke a na-egosi na ọ gaghị adị ruo mgbe ngwụcha 2019 ga-ahụ ọkụ mgbe ha kwadebere USB-C.
Nke a abụghị oge mbụ na-ekwu okwu banyere otu Apple nwere ike isi mee na-enweghị njikọ Lightning na ngwaọrụ mkpanaka ya, n'agbanyeghị, n'ihi oke mgbanwe nke a pụtara, ọ ka anyị ga-echere ma ọ dịkarịa ala otu afọ na ọkara maka mgbanwe a ka emechaa mezuo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Kọmputa » Hardware » Amụma, Apple ga-nzọ na USB-C na ọgbọ na-abịa iPhone
Fortnite dị ugbu a maka Nintendo Gbanye kpamkpam n'efu
Xiaomi Redmi S2 bịarutere Spain, ekwentị kachasị mma maka selfies